बहादुर श्रीमान : बाघको मुखबाट श्रीमती-लाई यसरी बचाए श्रीमानले (भिडियो सहित)
January 25, 2021 617
दाङ्गको लमही नगरपालिकाका वडा नं. ८ को खोली गाउँकी एक महिलालाई बाघले आ क्रमण गरेको थियो । तर ती महिलालाई उनका श्रीमानले बा’घको मु’खबाट ब’चाएका छन् । उनी बाघको प’ञ्जाबा’ट त बाँच्न सफल भएकी छन् तर उनको अनुहार र टा’उकोको भा’गमा भने बा’घले निकै नै ग’हिरो चो ‘ट दिएको छ ।
उनको आँखा, नाक, मुख र टा’उकोको प’छाडीको भागमा बाघले आफ्नो प’ञ्जाले झ ‘म्टिएर उनलाई घा’ईते बनाएको छ । बाघको आ’क्रम’ण’मा परेकी ती महिला आफ्नै श्रीमान र गाउँकै नाता पर्ने एक जना ससुरासंग नजिकैको जंगलमा बाख्रा चराउन गएकी थिईन् । त्यही समयमा उनलाई बाघले अ’चानक आ’क्र’म’ण ग’रेको उनका श्रीमानले बताएका छन् ।
बाघले ल’ता’र्दै लगेको कुरा ती महिलासंगै जंगलमा बाख्रा हेर्न गएका नातामा ससुरा पर्नेले बताए । उनको भनाई अनुसार उनी र ती घाईते महिला एकै ठाउँमा बसेर बाख्रा हेरी रहेका थिए । दुवैजना बसेर कुरा गर्दै बाख्रा हेरी रहंदा अचनक बाघ आएर उनलाई झ’म्टिएर ल’ग्यो । बाघ आ’एको कुनै सुईँको नै नपाएका ती ससुराले ए’क्कासी आफैसंग बसिरहेकी बुहारीलाई बाघले लगेपछि भने आफु अ’त्तालिएको बताउँछन् ।
बुहारीलाई बाघले ल’ग्दै गर्दा उनले पर बाख्रा हेरी बसेका छोरा अर्थात ती महिलाको श्रीमानलाई बोलाए । आफ्नो श्रीम’तीलाई बाघले ल’गेको कुरा थाहा पाएपछि उनी बा’घको पछिपछि गए र बाघको मुखबाट श्रीमतीलाई छु’टाएर ल्याए । उनले श्रीमतीलाई त छुुटाए तर उनको श्रीमतीको स्वास्थ्य अवस्था भने निकै नै ग’म्भिर भएको हुनाले अहिले ती महिलालाई थप उप’चारकोलागी काठमाण्डौ ल्याईएको छ । भिडियो’सहित
Prevरवि लामिछाने बिनाको सीधाकुरा जनतासँग कार्यक्रमको भिडियोमा लाइक भन्दा दोब्बर बढी डिस्लाइक
Nextबाटोमा माग्न बस्ने कतिपयले हामीलाई यसरी उल्लू बनाइरहेका हुन्छन् (हेरौं यो छक्क पार्ने भिडियो)
प्रकाश सपुतले त्यस्तो के भने ? जसले गर्दा अन्तर्वातामा नै रोइन् ज्योती मगर (भिडियो सहित)
विराटनगर महानगरले फेरि गर्यो लकडाउनको घोषणा
रवि लामिछाने प्रदेश एक पुगेर खाली खुट्टै यसरी खटे काममा (भिडियो सहित)
यो फोटोमा उत्कृष्ट क्याप्सन लेख्नेलाई गाडी उपहार दिइने..
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (65036)
भर्खर बिहे गरेकी स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (62435)
आँचलले लेखिन् आलोचकहरुलाई मन रुवाउने पत्र, पलको विषयमा यसो भनिन् (भिडियो) (52157)
वीर अस्पतालमा आँखा झिकि’एको भन्ने शवको भिडियो बाहिरियो, यस्तो रहेछ भिडियो..हेर्नुहोस्.. (50931)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (50865)
आँचलले कसलाई हाल्ने भइन् मुद्दा? प्रमाण सहित उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेपछि..(भिडियोसहित) (46637)
एक पिता जो छोरी लिन स्कुल पुग्दा उनको पाइन्ट अगाडिपट्टि भिजेको थियो ।सबैले पुरा पढ्नुहोला (46628)
अन्ततः काठमाण्डौंको होटलबाट प्रेमीसहित फेला परिन हराएकी लाहुरेकी श्रीमती (भिडियो सहित) (41486)
अचान’क छोरीको मोबाईल हेर्दा आमाबुबाको उ’ड्यो होस,यसबाट सबै जना सचे’त रहनुहोला (38722)
बेवारिसे श’व भनेर फेवातालवाट बाहिर निकालेपछि कृष्णको उड्यो होस्, आफ्नै भाईलाई मृ’त देखेपछी (भिडियोसहित) (33825)
कन्चनको अन्त्यसँगै अनिशाको सिउँदो पखाल्ने भन्दै गाउँले पुगे अनिशाको घर, स्थिति तनाव’ग्रस्त (भिडियोसहित)
बिहेपछि अन्जु पन्त र थीर कोइरालाले भाँडा माझ्दै गरेको भिडियो सार्वजनिक (भिडियो सहित)
कन्चनले संसार छाडेपनी कन्चनको यो प्रेमिल भिडियो बन्यो भाइरल (भिडियो हेर्नु’स)
कन्चनको मृ’त्युपछि आमाको यस्तो दयनिय अवस्था, छैन आमाको होस् (भिडियो हेर्नु’स्)